Home Somali News Somaliland: Gobollada Iyo Degmooyinka Somaliland Oo Si Weyn Looga Ciiday
Waxa Sifiican looga ciiday dhammaan goboladda iyo degmooyinka dalka, iyadoo si weyn looga oogay salaadii ciidul fidriga.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa saaka boqolaal ka mid ah dadweynha ku dhaqan caasimadda Hargeysa kula tukaday masjid jaamaca weyn ee Hargeysa.
Madaxweyne Siilaanyo oo salaadii ciida ka dib la hadlay dadweynaha ayaa dhambaal hambalyo ah u diray shacbiga Somaliland oo uu ugu duceeyay inay sanadkan sanadkiisa ku gaadhaan bash-bash iyo barwaaqo.
Sidoo kale, waxa madaxweynaha Somaliland uu salaadii ciida ka dib uu dadweynaha ku qaabilay xarunta madaxtooyadda oo dad badan oo masuuliyiin, siyaasiyiin, xildhibaanno iyo dadweynaba, kuwaasi oo salaam sharaf ugu tagay madaxweynaha.
Sidoo kale, madaxweyne Ku xigeenka Somaliland Md. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) ayaa isaguna boqolaal qof oo ka mid ah dadweynaha reer Hargeysa salaadii ciida kula tukaday garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium, waxaanu dadweynaha ugu shacbiga Somaliland ugu baaqay inay u midoobaan danta guud.
Madaxweyne Ku xigeenku waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhaqanka dimuqraadiyadda laga ilaaliyo in lagu badhxo qabyaalad.
Geesta kalena waxa si weyn looga ciiday goboladda Somaliland oo dhan, waxaana dadweynaha khudbado fagaareyaal kala kala hadlay masuuliyiinta goboladda iyo degmooyinka oo dadweynaha ugu baaqay inay nabad-gelyadda ilaalinteeda xukuumadda kala shaqeeyaan.